कट्रिनाले आफ्नो विवाहमा के सलमानलाई निम्ता दिइनन् ? सलमानको बहिनी अर्पिताले खोलिन् रहस्य - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / कट्रिनाले आफ्नो विवाहमा के सलमानलाई निम्ता दिइनन् ? सलमानको बहिनी अर्पिताले खोलिन् रहस्य
बलिउड अभिनेता विक्की कौशल र कट्रिना कैफ केही दिनमै विवाह बन्धनमा बाँधिदैछन् । यस विषयमा दुवैले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् तर विवाहको चर्चा दिनप्रतिदिन बलियो बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमा विवाह स्थलदेखि लिएर यसमा राख्नु पर्ने कडा नियम र विक्कीले कट्रिनालाई कसरी प्रपोज गरे, त्यससँग सम्बन्धित सबै अपडेट बाहिर आइरहेका छन् ।
इन्डिया टुडेको नयाँ रिपोर्ट अनुसार कट्रिना कैफले जयपुरमा हुन लागेको विवाहमा सलमान खान र उनको परिवारलाई निम्तो दिएकी छिन् । कट्रिनाले सलमान र उनका दिदीबहिनीलाई औपचारिक निमन्त्रणा पठाएको बताइएको छ । खबरको विश्वास गर्ने हो भने अग्निहोत्री, कट्रिना कैफको विवाहमा सलमान खान, अर्पिता खान र अलविरा खान सहभागी हुने भएका छन् ।
अर्पिताले जवाफ दिइन्
तर, अर्पिता खानसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा उनले आफुलाई अहिलेसम्म कुनै निमन्त्रणा नआएको र आफु बिहेमा सहभागी नहुने भन्दै यो खबरलाई टुङ्ग्याइन् । सलमान खानको परिवारले कुनै पनि निमन्त्रणा नपाएको परिवारको नजिकको स्रोतले बताएको छ । अर्पिता र अल्विरालाई कट्रिनाको विवाहको निम्तो समेत प्राप्त भएको छैन । बिहेमा सबै सहभागी हुनेछन्, यो खबर झुटो हो ।
सलमान खान र कट्रिना कैफ आगामी फिल्म ‘टाइगर ३’ मा सँगै देखिने भएका छन् । दुबैको व्यावसायिक र कार्य सम्बन्ध छ। इनसाइडरका अनुसार सलमान खान कट्रिनालाई निकै मन पराउँछन् र उनी अभिनेत्रीको निकै सुरक्षात्मक पनि हुन्छन् । उनले कट्रिनालाई बधाई दिए। विवाहपछि कट्रिना फिल्मको सु टि ङमा फर्किने छिन् । दुवै कलाकार निकै व्यावसायिक छन् ।